Home MAQAALO Wadadda keliya ee waddan laggu badbaaddin karro waa in dadka loo-kalla qaaddaa...
Somalia waa Dowladda hadda ka soo kabaneyso burbur iyo dhibaato waxaanna ka jirro macluul iyo Dowladda aan wali hanna qaaddin si kastaba hannoqotee waxaa lagudboon Dowladda cusub ee uu hogaamiyo Madaxweynaha 15-kii may ladoortay Hassan Sheikh Mohamud.?
Waxaa horyaallo labba qodob oo aad muhiim u ah Dalkaan iyo Dadkaanne u horseeddi karto barwaaqo iyo Amni warro waanna labba qodob oo aan ladheyalsan karrin si waliba oo aay ahaato ileyn dalku wuxu rabaa in lajiheeyo.
1:cadalad marka lagga hadlaayo waa qodob laf-dhabar u ah Dal jirraa guud ahaantiis oo wax waliba hoos immaanayaan haddii cadaalad lahelin masii taagnaan karro manna sii shaqeyn karro Dal sababtoo ah Dalku wuxuu ku taaganyahay Dadka waanna sababta keenni karto haddii cadaalad lahelin innuu Dalka jilbaha dhulka ku dhufsanaayo haddiiba Dadkii ka turjumaay Dalka Cadaalad helli karri wayeen Dalku meesha ayuu ka baxaa fasiraadda cadaaladdu waa in si siman loolla macaamillo Shacabka magaca Dowladda huggan .
2: xaq Amma xaquuq sidda aan wadda ogsoonahay Dalkaan waxaa ka jirro xaqdarro hanoqoto hanti lakalla dhacay dhul lakalla heysto xaq laduudsiiyay kii lahaa iyo micnaha xaqa oo gabbi ahaanba lagga fahansaneyn Dalka Somalia inta fahansane aay ka yartahay 15% masaakiin iyo maato baddan ayaanna xaqooddii laggu tuntay wax yar oo bidhaamin ah oo xaqa idiin bidhaamineyso haddii aan halkaan ku soo qaato waa sidda xaqii aay laheyd hooyadda dhashay Ikraan Tahliil u helli karri weysantahay xaquuqddii gabadheedda marba haddii shacabka loo-kalla xaqsoorri karri waayo majirri doonto shacab Dowlad ku kalsoonnaan karro waanna sababaha Dowladd waliba u hanna qaaddi weysantahay .
Aqristayaal baddan ayaa isweydiin doonno hanna qaadka Dowladnimo iyo dhismo Dowlad awood leh wuxuu uggu soo koobay Qoraagga labba qodob oo keliyah oo kalla ah Cadaalad iyo Xaq Amma xaquuq lagga yaabee inuu aqristaha ku wareeray labaas qodon oo uu is leeyahay aaway Amnigii dhaqaalihii Siyaasaddii Sirdoonkii.
Wax waliba waxaa asal u ah Cadaaladda iyo Xaqa marka lagga hadlaayo nidaam Dowladnimo oo larabo in laggi manaafacaaddo Siyaasadda iyo Dhaqaalaha iyo wax waliba oo maankaadda ku jirro lamma heli karro illaa lagga hello cadaalad iyo Xaq waanna labadda qodob oo haddii lahello wax waliba oo kallane laheli doonno ileyn amni lamma helli karro haddii cadaalad lahellin waanna wax iska cad.
Mar kalle aan sii kalla shaandheeyo xaqu waa Kan kalla saarro qofka wuxuu leeyahay Amma uusan Laheyn cadaaladdu waa tan kalla iftiimiso maamulka ummad jirto Amma Dowladnimo larabo in laggu manaafacaaddo dadkunna aay dareemaan macaanka Dowladnimadda cadaaladdu waa tan kalla cadeyso caddaan iyo madoow waxa aay kalla yihiin ayidoo eex Amma faafreeb aysan jirrin.
Haddii Xildhibaan qolla ka dheeyo lasoo doorto uu jilib ka mid ah qolladdii soo dooratay u wadda biiso wax waliba oo jaanis ah waxeey dhalineysaa cadaalad darro waanna micnaha uggu weyn oo dadka kalla fogeeyo micno tirro micnaha cadaaladda laggana dhaxlo burbur.
Haddii aan wadda fahano cadaaladda iyo Xaqa waan wadda guuleysaneynaa Dalkaan iyo Dadkaanne hormar ayeey wadda gaarayaan.
Previous articleHooyo shaqada uga tagtay si ay ubadkeyga u Naas nuujiso
Next articleWasiirka Arrimaha Dibadda Talyaaniga Mr. Luigi Di Maio ayaa soo gaaray Muqdisho.
Xafiiska Hantidhawrka Guud oo xeerilaalinta qaranka ku wareejiyay macluumaad ku saabsan...